Ammonium Chloride နှင့်ရေ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ammonium Chloride နှင့်ရေ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Ammonium Chloride နှင့်ရေ ထုတ်ကုန်များ)
တရုတ်အမည်: Ammonium metamatenateAmmonium metamatellate hydrateEnglish အမည်: Ammonium TUNGSTATE (META) HYDRATEEnglish alias ကို: Ammonium METATUNGSTATE ဓါတ်ကိုပြန်လည်, 99 .; = W; CAS မျှ။ : 12333-11-8Molecular ပုံသေနည်း: H28N6O41W12Molecular အလေးချိန်: 2974.32000Precise အစုလိုက်အပြုံလိုက်: 2975,44000 တိကျတဲ့: Impurity...
Ammonium တွင် Meta Tungstate-AMT grade: AMT-1 ပေါ်လာ: အဖြူရောင်အမှုန့် အဓိကအကြောင်းအရာ: WO3> 89% ကြွက်နို့ INOSLULE.PHvALUE: 650g / L ကိုဖြေရှင်းချက်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရမည့် WO3 ၏အကြောင်းအရာ ကြွက်နို့ INOSLULE: <= 0.05% PH ကို Value ကို: <=4တိကျတဲ့: Impurity Content...
Ammonium Paratungstate-APT grade: APT-0 ပေါ်လာ: အခမဲ့ကိုအခြားသွန်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားကိစ္စအဘယ်သူမျှမနှင့်အတူအဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲလိုင်းအမှုန့်စီးသော။ အဓိကအကြောင်းအရာ: 3> 88,5% wo (ထိုနုတ်နည်းလမ်းအားဖြင့်တွက်ချက်) Pack: 200kg သို့မဟုတ် 100kg အသားတင်တစ်ဦးချင်းစီ၏အတွင်းစိတ်ပလပ်စတစ်အိတ်နှင့်အတူသံဗုံ၌။ တိကျတဲ့: Impurity...
တစ်ဦးကရေ - ပျော်ဝင်အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့်သို့မဟုတ်အဝါရောင်က hue ။ တိကျတဲ့: Impurity Content Grade AMT-1 Grade AMT-1 Impurity Content %MAX Ai
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် CAS: 11120-25-5 Ammonium paratungstate
Ammonium paratungstate အများစုအလွှာသို့မဟုတ်ဆေးထိုးအပ် form မှာအဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲဖြစ်ပြီးသတ္တုအဖြိုက်နက်အမှုန့်ဖြစ်စေခြင်းငှါအဖြိုက်နက် trioxide သို့မဟုတ်အပြာရောင်အဖြိုက်နက်အောက်ဆိုဒ်ပါစေရန်အသုံးပြုသောဓာတုဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့: Impurity Content Grade APT-0 WO3 Min (%) 88.5 Chemical...
CAS: ကောင်းသောအဘိုးနှင့် 11120-25-5 Ammonium paratungstate
Ammonium paratungstate Ammonium metatungate နှင့်အခြားအဖြိုက်နက်ဒြပ်ပေါင်းများထုတ်လုပ်နှင့်ရေနံဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထို့အပြင်အဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ဓာတုဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့: Impurity Content Grade APT-0 WO3 Min (%) 88.5 Chemical...
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် Ammonium paratungstate 11120-25-5 အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်း
●ဓာတုအမည်: Ammonium paratungstate အဘယ်သူမျှမ .: ● CAS 11120-25-5 ● Molecular Fomula:5(NH4) 2O.12WO3.5H2O ●ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ:5(NH4) 2O.12WO3.5H2O ●မော်လီကျူးအလေးချိန်: 1419,57 ●ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အဖြူရောင်အမှုန့် တိကျတဲ့: Impurity Content Grade APT-0 WO3 Min (%) 88.5 Chemical...
Ammonium paratungstate CAS 11120-25-5 စျေး
Ammonium paratungstate အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲ powder.It အဖြိုက်နက်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အဖြိုက်နက်သတ္တုအမှုန့်အဖြစ်ရေနံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဓာတ်ကူပစ္စည်းထုတ်လုပ်များအတွက် universal အလယ်အလတ်ထုတ်ကုန်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ တစ်လောကလုံး application များအတွက် APT နှင့် APT အရည်အသွေးမြင့် monocrystal နှစ်ဦးစလုံးငှေပါ။ ကိုအသုံးပြုသည်:...
သတ္တုအဖြိုက်နက်မှုံ့၏မြစ်အောက်ပိုင်းထုတ်ကုန်ထိုကဲ့သို့သောအဖြိုက်နက်ဘား, အဖြိုက်နက်ဝါယာကြိုးများနှင့်အခြားလျှပ်စစ်လေဟာနယ်ပစ္စည်းများအဖြစ်အဖြိုက်နက်ပစ္စည်းစီးရီးများပါဝင်ပါသည် တိကျတဲ့: Impurity Content Grade APT-0 WO3 Min (%) 88.5 Chemical...
1: အသုံးပြုသောနှင့်အညစ်အကြေးသူတို့ကိုတွင်ပါရှိသော concentrates အဖြိုက်နက်အမျိုးအစားများအရအောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအလယ်တန်း Ammonium tungstate ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်။ high-ဖိအားအယ်လကာလီကြွက်ကြွက်ဆူ (caustic soda) - အိုင်းလဲလှယ် - အနက်ရောင်အဖြိုက်နက်အာရုံ၏ရေငွေ့ပျံ crystal နည်းလမ်း;2။...
အဓိကအားဖြင့်အဖြိုက်နက် trioxide သို့မဟုတ်အပြာရောင်အဖြိုက်နက်အောက်ဆိုဒ်သတ္တုအမှုန့်ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြု တိကျတဲ့: Impurity Content Grade APT-0 WO3 Min (%) 88.5 Chemical Composition...
ထောက်ပံ့ရေးအရည်အသွေးမြင့် Ammonium paratungstate CAS 11120-25-5
ဓာတုအမည်: Ammonium PARATUNGSTATE CAS No.:11120-25-5 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ: H40N10O20W5 မော်လီကျူးအလေးချိန်: 1419,57 ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲ...
အရည်အသွေးမြင့်မား Ammonium paratungstate CAS 11120-25-5
Ammonium paratungstate အဘယ်သူမျှမ .: CAS 11120-25-5 EINECS: 231-143-9 မော်လီကျူးအလေးချိန်: 1419,57 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ: H40N10O20W5 အရည်ပျော်အမှတ်: 3410 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (lit ။ ) ပွက်ပွက်ဆူနေသောအချက်: 5660 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (lit ။ ) သိပ်သည်းဆ: 25 ° C (။ lit) မှာ 2.3 g / mL Properties ကို: ရေ၌မမြဲသောသို့မဟုတ်...
ရောင်းရန် Ammonium တွင် Meta Tungstate
တစ်ဦးကရေ - ပျော်ဝင်အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲအမှုန့်သို့မဟုတ်အဝါရောင်က hue ။ Ammonium metatungstate ရေထဲမှာပျော်ဝင်သည် ဖြစ်. , Ammonium paratungstate Ammonium metatungstate နှင့် Ammonium paratungstate ကြားရှိသိသာခြားနားချက်သောရေ၌အနည်းငယ်ပျော်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့: Impurity Content Grade AMT-1 Grade AMT-1 Impurity Content...
မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေး Ammonium တွင် Meta Tungstate
Ammonium metamatunate အမျိုးမျိုးသောရေနံဓာတုအဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာ၏ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အခြားအဖြိုက်နက်ဒြပ်ပေါင်းများတွင်လည်းအသုံးပြုပါသည် တိကျတဲ့: Impurity Content Grade AMT-1 Grade AMT-1 Impurity Content %MAX...
တစ်ခုကပို့ကုန်လိုင်စင်ပို့ကုန်ကုန်စည်များ၏ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်တစ်ဦးနိုင်ငံ၏ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကထုတ်ပေးထားတဲ့ပို့ကုန်ပါမစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ကုန်လိုင်စင်စနစ်က Ammonium metamatunate ၏ goods.The ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေးများ၏ပြည်ပပို့ကုန် 4xy အဖြစ် coded...
အရည်အသွေးမြင့်မား Ammonium တွင် Meta Tungstate
Ammonium metamatunate သတ္တုအဖြိုက်နက်, အလွိုင်းသံမဏိ, fireproof ထည်နှင့်ကြွေစက်မှုလုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။ တိကျတဲ့: Impurity Content Grade AMT-1 Grade AMT-1 Impurity Content %MAX...
Ammonium Chloride နှင့်ရေ Ammonium Chloride ၏ပြင်ဆင်မှု Ammonium hydroxide ဂတ်စ် Ammonium hydroxide နှင့် Acetic Acid Ammonium Chloride ဝီကီပီးဒီးယား Ammonium Paratungstate သင်္ကေတ Ammonium Chloride ၏ပျော်ဝင် Ammonium sulfate ဖြတ်
Ammonium Chloride နှင့်ရေ
Ammonium Chloride ၏ပြင်ဆင်မှု
Ammonium hydroxide ဂတ်စ်
Ammonium hydroxide နှင့် Acetic Acid
Ammonium Chloride ဝီကီပီးဒီးယား
Ammonium Paratungstate သင်္ကေတ
Ammonium Chloride ၏ပျော်ဝင်
Ammonium sulfate ဖြတ်